अक्सीडेन्टल स्कुलको खेलकुद महोत्सब | KhelkudNews.com
अक्सीडेन्टल स्कुलको खेलकुद महोत्सब
Published on February 5, 2018, by Manoj Shiama - Posted in others 0
अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले २५औँ वर्ष प्रवेश तथा रजत जयन्तीको अवसरमा खेलकुद महोत्सव आयोजना गरेको छ । १७ देखि २० माघसम्म सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्र, लगनखेलमाविद्यालयमा स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. सिद्धिप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा महोत्सब भएको हो । विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिे थिए । सो अबसरमा विद्यार्थीले आफ्नो अन्तस्करणदेखि नै खेल क्षेत्रलाई रुचाएमा राम्रा खेलाडी विद्यालयले उत्पादन गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का, रा.खे.प. तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख रिम रानाभाट, नेपाल ओलम्पिक सङ्ग्रहालयका अध्यक्ष क्षितिज अरुण श्रेष्ठ, फिल्म निर्देशक राज्य राई, चलचित्र नायक आयुस रिजाल, त्रि.वि.वि. व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ र ओलम्पियन विमला रानाभाट विशेष अतिथि थिए । कार्यक्रममा फुटबल, क्रिकेट, खो—खो, दौड, लङ्जम, बास्केटबल, हेन्डबल, कबड्डी आदि खेलहरू सञ्चालन भएका थिए । खेलकुदमा विजयी खेलाडीहरूलाई अतिथिहरूले मेडल तथा ट्रफी वितरण गरे ।
कार्यक्रममा सम्पूर्ण अतिथि, अभिभावक र सहभागी सम्पूर्णलाई ओ.पी.एस. स्पोर्टस काउन्सिलका अध्यक्ष गोपाल पौड्यालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुका साथै विद्यालयका निर्देशक श्री डी.बी. निरौलाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
रुचाल र पार्करको सम्मान
सबैले आत्मरक्षा सिके हिंसा आफै कम हुन्छ ः सेल्फ डिफेन्स प्रशिक्षक हमाल
सातौं मि. हिमालय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता बैशाखमा
मस्को हाप्किडो ओपनमा नेपाललाई स्वर्ण
ध्रुब नै अब्बल
प्रधानको अध्यक्षतामा जिम्न्याष्टिक संघ एकिकरण